Iyo yakanaka yeMozilla. Firefox yakasarudzwa se "mhando huru" | Linux Addicts
Mugore rapfuura, ese ari maviri Pablinux kubva pakuona kwehunyanzvi como yo kubva kumasangano, Isu tanga tichimaka kudzikira zvishoma asi kusingamisikike kweFirefox browser. Mukuona kwangu, izvi zvakafanira zvakangonaka uye chete kune zvikanganiso zvekutonga zveMozilla Foundation zviremera kuti, kubva pakubva kwaBrendan Eich, vakaisa kururamisa kwezvematongerwo enyika uye kuchengetedzwa kwehupfumi kwechibvumirano chemari cheGoogle pamberi pechido chevashandisi.
1 Iyo yakanaka yeMozilla
1.1 Zvikonzero zvekubatanidzwa
Iyo yakanaka yeMozilla
Sezvo mugove wemusika uchiramba uchidzikira uye vashandisi vazhinji vanotamira kuChrome, zvichibatsira Google iri pedyo-yega kuti Gates neBallmer's Microsoft itaridzike seyeMahara Software Foundation, Firefox ndiyo yega mhando yeakavhurika sosi purojekiti inosanganisirwa mune rondedzero yemhando huru.
Fast Kambani inodhinda yemwedzi nemwedzi yakadhindwa yakatsaurirwa kune nyika yebhizinesi iyo zvakare inoburitsa zvirimo pawebhusaiti yayo. Munguva pfupi yapfuura post iyo 2021 vhezheni yerunyorwa rwavo "Zviratidzo zvine basa" Chimwe chinhu semhando huru kana mhando huru.
Vaparidzi vanotsanangura mabhureki makuru seaya:
vakava nepesvedzero isingarambiki pabhizimisi netsika, kupfuura zvikuru zvinhu zvavanotengesa.
Firefox, ndiyo yega mhando yemahara uye yakavhurika sosi software purojekiti inoonekwa mune rondedzero, kunyangwe paine vamwe vane nhoroondo refu yekubatana neLinux uye yakavhurika sosi senge IBM (muridzi weRed Hat).
Zvikonzero zvakaita kuti Fast Company ibatanidze Firefox murondedzero, usapokane nezvandanga ndichipokana kwegore. Asi vanozvisimbisa. Ivo havana kuiwedzera nekuda kwekubatsira kune yakavhurika Internet kana kuparadzira mhando yeyakavhurika sosi. Kubatanidzwa ndeyekuita zvematongerwo enyika.
Kubva muchinyorwa chavanonongedza iyo "Unfck Internet" mushandirapamwe umo nenzira dzakasiyana, kusanganisira yakazara-peji kushambadza mumapepanhau makuru, hwaro hwakakurudzira Facebook kubvisa zvinyorwa uye Twitter maitiro.ndinoziva hazvina kupindirana nemafungiro evakuru veMozilla izvo zvinoparira kuparadzira mashoko enhema kana kuti akamonyaniswa.
Zvakakodzera kutaura izvozvo kushambadzira kwepeji rakazara mubepanhau renyika muUS seWashington Post inoita madhora zana. Mugore rimwe chetero, nepo kushandiswa kweInternet kwakakura nekuda kwekuvharirwa kwakaiswa nedenda, Mozilla yakamisa vashandi mazana maviri nemakumi mashanu uye yakasiya kutonga kweRust programming mutauro. Vazhinji vevashandi ivavo vakatorwa neMicrosoft neGoogle. Google ndiyo kambani inobva mari zhinji yeMozilla Foundation. Mari dzinobuda miripo yevatungamiri ve Foundation.
Uyezve, Fast Company inoti:
Firefox inoramba ichiita zvainogona kuzviratidza sebrowser inotsvaga kudzivirira kubva kune zvisirizvo uye kutora mutoro wedhijitari sezviratidzo zvemhando yayo.
Semuenzaniso weizvi vanodudza iyo RegretsReporter yekuwedzera uye "YouTube Regrets mushandirapamwe wakanangana nekurwisa" kurudziro isina kufanira »paYouTube
Mushandirapamwe weUnfck uye basa reYouTube Regrets rine chinangwa chayo, richiratidza hukama hwaMozilla hwaDavid naGoliath nehutekinoroji hombe, uye basa rayo rakamiririra vanhu vari pamusoro pepurofiti uye vanhu pamusoro peporofiti. Sezvo nyaya idzi dzichiva kunetsekana kwepeji rekutanga, chinzvimbo cheFirefox uye mhando zvakawedzera kusimba.
MunaSeptember wegore rino kutora chikamu Mumusika wemapuratifomu ese Firefox iri 3,67% inopfuurwa neachangosvika Edge 3,77, Safari 18,4 uye Google Chrome 65,15%.
Tinogona kufunga kuti Edge imhaka yekuti inouya isati yaiswa muWindows. Asi, kana tikaenda kune data remusika wePC tinoona kuti kune 8,75% yeEdge inopesana ne7,93 yeFirefox. Chrome inowedzera 67,56%.
Ndoti kudii. Sezvakangoita pandinotenga foni ndinotarisa zvakanyanya pakugona kwayo kutaurirana pane kugadzirisa kwekamera, pandinosarudza browser ndinonyanya kufarira kuita pane ideology. Kana ndikamboita chinzvimbo chemhando dzakakodzera, ndaizoisa LibreOffice, Apache, GNU kana mamwe mapurojekiti akabatsira kuita kuti hupenyu hwevashandisi huve nani. Kune iyi Firefox, never.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Iyo yakanaka yeMozilla. Firefox yakasarudzwa se "chikuru mhando"
Zvakanaka, ndinokunzwirai tsitsi. Zvakanakira Firefox zvakajeka (iwe unofanirwa kuziva maitiro ekuzvitarisa) uye munhu wese ane zvaanoda.
Kuremerwa uye kusaruramisira ruvengo rwakaratidzwa paFirefox. Vatungamiri veMozilla vanga vachiita zvinhu zvakawanda zvisina kunaka (kutanga, kumisa vashandi nekuisa zvinhu zvevaridzi mubrowser), asi seInternet browser, uye nekuisa mumamiriro ezvinhu, Firefox ichiri chishamiso, uye maererano nehutungamiriri. zviri pachena kuti Pakati peMozilla, Google, Microsoft, kana Apple, munhu anofanirwa kugara neMozilla (pasina kukanganwa kuti ndiyo chete inogadzira uye inoburitsa bhurawuza iri yemahara software pamusimboti, uye kuti nedaro hainyanyi kupinda kupfuura vamwe ...).
Kwaziwai, uye kutenda nechinyorwa.
Zvinoita sezvisina kunaka neFirefox, zvingave kuti munguva yekupedzisira yanga ichirasikirwa nerutsigiro asi ichiri bhurawuza rakanaka. Uye iyo chete inoshanda zvinoshamisa pane yekare laptop ine akawanda ma tabo akavhurika (uye ini ndaedza akati wandeisss).